GNU / Linux - Linux မှ Linux မှ (စာမျက်နှာ 3)
EasySSH သည် SSH အတွက် GUI ပါ ၀ င်သည့်ရိုးရှင်းသောသုံးစွဲသူဖြစ်သည်
EasySSH သည် SSH protocol မှတဆင့်ဆက်သွယ်မှုများအတွက်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်းတွင် GUI ရှိသောကြောင့်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ EasySSH အတွက် SSH protocol အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည့်ဂရပ်ဖစ်စနစ်တွင်အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်ရိုးရှင်းသော GUI ရှိသည်။
Wayland 1.16 ကိုအချို့သော update များနှင့်အတူဖြန့်ချိ
Unix ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့သည့်ဂရပ်ဖစ် X ဆာဗာတွင် Wayland ကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအခြားနည်းလမ်းများရှိသည်။ Wayland မဟုတ်သောသူများအတွက်စာကြည့်တိုက်နှင့် graphical server protocol suite တို့သည် X အတွက်လက်တွေ့ကျကျမဟုတ်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ubuntu 13 LTS ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသော Dell သည် XPS 18.04 Developer Edition အသစ်ကိုလွှတ်တင်ခဲ့သည်
Ubuntu 13 LTS Bionic Beaver ပါ ၀ င်သည့် laptop အသစ် Dell XPS 18.04 Developer Edition ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
Valve သည် SteamOS ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစွန့်လွှတ်ရန်ဝေးကွာသောကြောင့်၎င်း၏ GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှု၏တည်ငြိမ်သောဗားရှင်းသစ်ကိုယခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ operating system သင်ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုနှစ်သက်ပြီးစစ်မှန်သောဂိမ်းကစားလျှင် Debian 8.11 ၏အင်္ဂါရပ်အသစ်များနှင့်အတူ SteamOS ဗားရှင်းသစ်ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မည်
ဝိုင် ၃.၁၃ သည်အဓိကတိုးတက်မှုများဖြင့်ထွက်နေသည်
Wine 3.13 ဗားရှင်းကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ၊ ထို့ကြောင့်ငါတို့အားလုံးသည်မူလဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်နိုင်ရန်ဤထူးခြားသောလိုက်ဖက်ညီမှုအလွှာကိုခံစားနိုင်သည်။
Debian GNU / Linux 9.5 "Stretch" သည်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှု ၁၀၀ နှင့်အဆင်သင့်ရှိသည်
Debian 9.5 "Stretch" သည်ယခု GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှု၏လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်သောအရေးကြီးသောနောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အတူရရှိနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် Debian 9.5 ကိုယခုလုံခြုံရေး GNU / Linux distro ၏အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေမည့်လုံခြုံရေးမွမ်းမံမှု ၁၀၀ နှင့်အခြားပြင်ဆင်မှုများဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
Arch repository (AUR) တွင်တွေ့ရသော malware
Malware ကို AUR repository တွင်ထင်ရှားသော GNU / Linux Arch distro တွင်တွေ့ရှိရသည်။ သာယာသောလုံခြုံရေးပြproblemနာမဟုတ်ပါ။
Snap ၏အကူအညီဖြင့် Notepad ++ စာသားအယ်ဒီတာကိုထည့်သွင်းပါ
အကယ်၍ သင်သည် Windows မှပြောင်းရွှေ့သွားပါကအောက်တွင်ဖြန့်ဝေထားသောကျော်ကြားပြီးအခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်တည်းခိုခန်းဖြစ်သော Notepad ++ ကိုသင်သိထားသင့်သည်
Linux Kernel 4.16 သည် ၄ ​​င်း၏သံသရာအဆုံးသို့ရောက်ရန်မွမ်းမံရန်အကြံပြုသည်
Linux Kernel 4.16 အဆုံးသတ်သွားပြီ၊ နောက်ဆုံးဌာနခွဲ 4.17 သို့ update လုပ်ပါ
Etcher: bootable discs တွေကိုဖန်တီးရာမှာအကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခု
၎င်းသည်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်အောင်သေချာစေရန် JS, HTML, node.js နှင့် Electron စသည့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နည်းပညာများပေါ်တွင်သီးသန့်တည်ဆောက်ထားသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
RecalboxOS - Rasberry Pi အတွက်ဂိမ်းကစားခြင်းကို ဦး စားပေးသည့်စနစ်ဖြစ်သည်
RecalboxOS သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် GNU / Linux စနစ်ဖြစ်သည်။ ဤစနစ်သည်သင်၏ Raspberry Pi ကို ...
qBittorrent: torrent များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရိုးရှင်းသော application တစ်ခု
လောလောဆယ် torrent များမှတဆင့်ဖိုင်များကိုအခမဲ့မျှဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားသည့် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာရှိသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ qBittorrent အကြောင်းပြောဆိုကြမည်။
SUSE သည်၎င်း၏ Caas Platform3cloud service ကို Kubernetes ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
SUSE သည်၎င်း၏ cloud service အသစ်ဖြစ်သော CaaS Platform3နှင့် Kubernetes နှင့်အတူစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဖိုင်တွဲများစွာကို Linux တွင်တစ်ပြိုင်နက်အမည်ပြောင်းပါ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ console တွင်တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖိုင်များစွာ၏အမည်ကိုအလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။
Endless OS: ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသောသုံးစွဲသူများအတွက်ဗားရှင်းအသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
Endless OS သည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြစ်ပြီးဒီဂျစ်တယ်သွေးခွဲမှုကိုပေါင်းကူးပေးသည့်အရာဖြစ်ပြီးယခုအခါနှေးကွေးသောကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုများ၏အားသာချက်ကိုရယူရန်အာရုံစိုက်သည်။
Ubuntu အတွက်ထိပ်တန်းခေါင်းစဉ် ၁၀ ခု
ကျွန်ုပ်တို့တည်ရှိပြီးဖြစ်သော Ubuntu အတွက်အကောင်းဆုံးသောအကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြပြီး၎င်းတို့နှင့်သိကျွမ်းရန်နှင့်သင့် desktop မျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလဲရန်သင်နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းပါ။
အရင်းအမြစ် Adobe Lightroom ဖွင့်လှစ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာများ
သူတို့ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ပုံရိုက်သူများအတွက် GNU / Linux နှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အတွက် Adobe Lightroom ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုတင်ပြသည်
NixOS: ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်ခေတ်မီ GNU / LInux ဖြန့်ဖြူးခြင်း
NixOS သည် GNU / Linux ဖြန့်ချိသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားသူများအနေနှင့်လည်းလူသိနည်းသောသို့မဟုတ်လူကြိုက်များခြင်းမရှိသေးသော်လည်းသက်သေပြရန်များစွာရှိသည်။ ဒီနေ့ဒီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီမံကိန်းကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကြည့်ဖို့ဒီဆောင်းပါးကိုဆက်ကပ်အပ်နှံလိုက်ပါတယ်။
Cheat - နောက်ထပ်အကူအညီတစ်ခု၊ ဒါကြောင့်သင် shell ထဲမှာရှိတဲ့ command တွေကိုမေ့သွားတယ်
Linux man manual သည်သင် command များနှင့်အလုပ်လုပ်သောအခါသင့်ကိုများစွာမကူညီနိုင်ပါကအသုံးပြုမှုဥပမာများကိုသင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သောကြောင့်သင့်အားရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိစေရန် cheat ကို install လုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
Purism Librem5သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်လာရောက်မည့် privacy-based Linux ဖုန်းဖြစ်သည်
Purism Libre5ဟုအမည်ရသောဖုန်းအသစ်သည် privacy နှင့်လုံခြုံရေးကိုအဓိကထားပြီး Linux အတွင်း၌ Linux ကိုဖြန့်ချိသည့်နေ့တွင်ရှိသည်
ဘယ်လို: Arduino IDE ကို Linux ပေါ်မှာ install လုပ်ပြီးသင်၏ Arduino အတွက်ပရိုဂရမ်ပုံဆွဲရန်စတင်ပါ
Arduino IDE ကိုမည်သည့် GNU / Linux ဖြန့်ဝေမှုမျိုးတွင်မဆိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်တပ်ဆင်ရန်အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းကိုရှင်းပြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပထမဆုံးပုံကြမ်းများကို စတင်၍ စတင်နိုင်သည်။
Download မန်နေဂျာများဆိုသည်မှာအင်တာနက်မှဖိုင်များကိုမည်သည့်အမြန်နှုန်းဖြင့် download လုပ်သည်ကိုမြန်စေသည့်အစီအစဉ်များဖြစ်သည်။ ငါတို့ GNU / Linux သုံးစွဲသူများအတွက် JDownloader2 ဟုခေါ်သော Multiplatform Download Manager ကောင်းတစ်ခုရှိသည်။
လက်ရှိတွင်အိမ်နှင့်ရုံးသုံးကွန်ပျူတာများ၏အဆင့်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသော Operating Systems များမှာ MS Windows, Mac OS နှင့် Linux တို့ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှုနှင့်စျေးကွက်ဝေစုများအတိုင်းအတူတူပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် Linux သည် Digital Mining အတွက်ရရှိနိုင်သောပစ္စည်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်သည် ဒါကြောင့်ကောင်းစွာ configured ဖြစ်ပါတယ်။
Qubes OS - လုံခြုံရေးအာရုံစိုက်တဲ့ operating system
Qubes OS ဆိုသည်မှာ Xen hypervisor ကိုအခြေခံပြီးသီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် desktop လုံခြုံရေးကိုအာရုံစိုက်သည်။ Qubes OS သည်အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သည်။ Qubes သည်သီးခြားအခန်းများအဖြစ်ခွဲခြားထားသောလုံခြုံရေးအားဖြင့်လုံခြုံရေးဟုခေါ်သောချဉ်းကပ်နည်းကိုယူသည်။
MellowPlayer သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုမည့် application ဖြစ်သည်။ MellowPlayer သည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်မျိုးစုံသောပလက်ဖောင်းပလေယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှု ၁၀ ​​ခုကျော်ကိုအထောက်အပံ့ပေးထားသည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပံ့ပိုးမှုရှိသည် - Spotify, Deezer, Google Play Music, Soundcloud, Mixcloud, 10tracks နှင့်အခြားအရာများ။
GNU Parallel: Terminal တွင်တစ်ပြိုင်နက်တည်းပိုမိုလုပ်ဆောင်ပါ
GNU Parallel သည် command line ပေါ်တွင်တစ်ပြိုင်နက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်၌အထောက်အကူပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းကိုသိရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
GPU ကို Virtualization တိုးမြှင့်ခြင်း
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစီမံကိန်းတစ်ခုနှင့် GPU virtualization အတွက်တိုးတက်မှုအသစ်များ၊ လက်ရှိတွင်ကွန်တိန်နာများနှင့် virtual machine များအတွက်အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသောအရာတစ်ခုခုကိုတင်ပြကြသည်။
CorvOS - စာသင်ခန်းအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း
အကယ်၍ သင်သည် GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုအသစ်တစ်ခုကိုလိုချင်နေလျှင်သင်ရှိပြီးသားဖြန့်ကျက်မှုများကိုငြီးငွေ့နေပါက CorvOS နှင့်ထုတ်လွှင့်ပြသသောအရာများကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
Atari VCS ကိုမေလ ၃၀ ရက်နေ့တွင်ကြိုတင် ၀ ယ်ယူနိုင်ပါသည်
retro Atari VCS Linux အခြေခံဗျူဟာကောင်စီသည်မေလ ၃၀ ရက်တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံး၎င်းသည်သင်ကြိုတင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည့်နေ့ဖြစ်သည်။
Ubuntu 18.04 သို့တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်အဆင့်မြှင့်ရန်အကြောင်းရင်းများ
ဤ Canonical ဖြန့်ချိမှုအသစ်သည် Linux သုံးစွဲသူများအကြားဖြစ်ပေါ်စေသည့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများအပြီးတွင် Ubuntu 18.04 LTS ကို install လုပ်ရန်ဆန္ဒရှိမရှိ၊ ယခင် version ကို update မလုပ်ရန်သင်မသိသေးသော်လည်းအကြောင်းပြချက်အချို့ရှိသည်။ သင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်
Ubuntu 18.04 သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲအဆင့်မြှင့်တင်ပါ
သင် Ubuntu 17.xx သို့မဟုတ် Ubuntu 16.04 ကိုအသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပြီး Ubuntu 18.04 LTS ဗားရှင်းအသစ်သို့အဆင့်မြှင့်လိုလျှင်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကွန်ပျူတာကိုပြန်လည်တပ်ဆင်စရာမလိုပဲသင်လုပ်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြပါရစေ။ Ubuntu 16.04 ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်Aprilပြီလအထိထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး Ubuntu 2021 သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဖြစ်သည်
terminal သည် Linux user တိုင်းတစ်ချိန်ချိန်တွင်အသုံးပြုရမည့် tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းအသစ်ရောက်ရှိလာသောလူများအတွက်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။
PDF မှစကားဝှက်ကာကွယ်မှုကို Linux မှမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်နည်း
ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်ဆင့်သင်ခန်းစာဖြင့် Linux ဖိုင်မှ PDF ဖိုင်မှစကားဝှက်ကာကွယ်မှုကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုရှင်းပြထားသည်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ Ubuntu သုံးစွဲသူများအတွက် Nvidia drivers များကိုတပ်ဆင်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်ထားရှိရန်ရည်ရွယ်ထားသော PPAs တွင် third-party Nvidia ဂရပ်ဖစ်ယာဉ်မောင်းများရှိသည်။ PPA သည်စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်တွင်ရောက်နေပြီဖြစ်သော်လည်း Nvidia မှယာဉ်မောင်းများကိုယခုမှသင်ရနိုင်သေးသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကောင်းမွန်သောနေ့တစ်နေ့၊ ဒီနေ့သင့်ကို ATI ကတ်များနှင့် GPU ပါ ၀ င်သည့်ပရိုဆက်ဆာများပါ ၀ င်သောပုဂ္ဂလိကယာဉ်မောင်းများကိုတပ်ဆင်ရန်နည်းလမ်းကိုသင့်အားသင်မျှဝေလိုက်သည်။
Linux တွင် ADB Shell နှင့် fastboot ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
adb နှင့် fastboot command များသည်သင်၏ android ဖုန်းကို USB connection မှတစ်ဆင့်သင်၏ PC မှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်တယ်လီဖုန်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အချို့တွင်လိုအပ်ပြီး terminal ကိုပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်။
၀ င်းဒိုးအတွက်နာမည်ကျော် Everest Ultimate နှင့် AIDA64 နှင့်သင်နှင့်ဆင်တူသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Sysinfo နှင့် GNU / Linux အတွက် Hardinfo အကြောင်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ hardware ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Ubuntu 18.04 ၏နောက်ဆုံး beta ကိုဤနေရာတွင်တွေ့ပြီးတရားဝင် version မရောက်ရှိမှီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှ VHS ကိုဒီဂျစ်တယ်ဗွီဒီယိုအဖြစ်ပြောင်းရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည်။ VHS တိပ်ခွေများနှင့်ကစားသမားများသည်အမြဲတမ်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဤပုံစံဖြင့်သင်၌ရှိသည့်အကြောင်းအရာကိုဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းရန်အရေးကြီးသည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူခြင်းသည်လူသားတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားချိန် မှစ၍ သင်ယူသည်။
ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီများအတွက် open source ဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်တတ်သည်။ သို့သော်မှားမည်ကိုစိုးရိမ်ခြင်းမရှိဘဲ Odoo ဟုကျွန်ုပ်မှတ်ယူသည်။
အခမဲ့ဆော့ဝဲများနှင့် GNU / Linux သို့နိုင်ငံတကာလက်လှမ်းမီသောဤကြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်သောဘလော့ဂ်၏နိုင်ငံတကာနှင့်လက်လှမ်းမီသောဧည့်သည်များ၊ မင်္ဂလာပါ။ ပြီးနောက်…
Linux မှာ ExFAT-format လုပ်ထားတဲ့ကိရိယာတွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
လွန်ခဲ့သောအချိန်က၎င်းတို့သည် Linux တွင် ExFAT ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးမပြုနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းများကိုစာရေးခဲ့သည်၊
terminal မှ Bitcoin နှင့်အခြား Cryptocurrencies ၏စျေးနှုန်းကိုကြည့်ရှုရန်
အမျိုးမျိုးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကို bitcoin နှင့်ပတ်သက်သည့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်များနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများစွာသောလျှောက်လွှာများရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်သဘောပေါက်သည်။
မင်းမဲ့စရိုက် Linux ကို: Revolutionizing Arch
ခဏကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်နေသောအရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ distro ကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ ...
လွန်ခဲ့သောအချိန်က Wine, Winetricks နှင့် PlayOnLinux ကိုအသုံးပြုပြီး Linux တွင် Legends Legends ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်စသည့်суперလမ်းညွှန်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အလားအလာကိုယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်ဒြပ်ထုပေါင်းစည်းခြင်းယန္တရားဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
Gridcoin: သိပ္ပံနည်းကျစီမံကိန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာများအတွက်ဆုလာဘ်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် cryptocurrency
Cryptocurrency algorithms သည်ပျံ့နှံ့သွားသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။
Variables ၁၀၁: သင်၏ကွန်ပျူတာကိုသိခြင်း
Hacking နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်
SinceLinux စာဖတ်သူများအားလုံးသည် 'hacker' ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားသင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း ChrisADR ကသူတို့ကိုလုံလောက်စွာမရှင်းပြနိုင်ခြင်းကြောင့် ...
gydl: youtube-dl အတွက်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်တစ်ခု
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် youtube-dl terminal အတွက်အစွမ်းထက်သောကိရိယာကိုနေ့စဉ် အခြေခံ၍ အသုံးပြုသည်၊ ၎င်းက youtube မှဗီဒီယိုများကူးယူရန်ဖြစ်သည်။
FacturaScripts ကို ၂၀၁၈ အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က FacturaScripts ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပြောခဲ့သည်မှာအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖြင့်ငွေတောင်းခံလွှာနှင့်စာရင်းကိုင်ခြင်း၊ ERP နှင့် CRM နှင့်အတူ ...
လတ်တလောတွင်စက္ကူအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့်သေဆုံးနေသောသစ်ပင်များသန်းချီ။ ဤသည်မှာ ...
Docusaurus - စီမံကိန်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခု
ဆော့ဗ်ဝဲဖန်တီးတဲ့အခါအရေးအကြီးဆုံးအလုပ်တွေထဲကတစ်ခုကတော့စာရွက်စာတမ်းများဖြစ်တယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ငါတို့အတွက် ...
Cumulonimbus - Podcast အတွက်ရိုးရှင်းပြီးလှပသော application
နေ့စဉ်စာဖတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူတစ် ဦး ထက်ပိုပြီးနားထောင်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊
၀ က်ဘ်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များသည် desktop application များကဲ့သို့ပြုမူကျင့်ကြံနေထိုင်သောကမ္ဘာ၌ ...
TeamViewer 13 ကို Linux Linux အထောက်အပံ့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်
Teamviewer 13 ရရှိနိုင်မှုကိုဇာတိ Linux အထောက်အပံ့ဖြင့်ရရှိခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်။
GLPI - ကွန်ပျူတာဥယျာဉ်၏အခမဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု
GLPI ။ ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အလိုအလျောက်စာရင်းပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် 100% ဝဘ်။ Windows၊ Mac၊ Linux၊ Android အတွက်သိုလှောင်ရုံများ။ Helpdesk ဆော့ဝဲ။
အစိုးရ - အစိုးရအတွက်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အတွေးအခေါ်သည်ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျော်လွန်သွားသည်။
Firefox Quantum: အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး Firefox
Firefox Quantum ဆောင်ပုဒ်သည်ဤဗားရှင်းကိုလုံလောက်စွာရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်၊
Port Scan Attack ကို PortScanDetector နဲ့ဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းအချက်အလက်၊ ကွန်ပျူတာများကိုသိချင်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသိလိုသည့်တစ် ဦး ချင်းစီ (သို့) စက်ပစ္စည်းများ၏နေ့စဉ်ကရုဏာ၌ရှိသည်။
Odoo Pos - အရောင်းအ ၀ ယ်နေရာကောင်းအရောင်းစင်တာ (POS / POS)
သင်၏အချိန်ကာလအရောင်းပြခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့် ပတ်သက်၍ blog တွင်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကပြောခဲ့သည်။
Odoo ကို Docker ဖြင့်မည်သို့သွင်းရမည်နည်း
ဆောင်းပါးတွင်သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ERP နှင့် CRM ကိုတည်ဆောက်ရန်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်စက်တစ်လုံးမည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်ကိုသင်ကြားသည်။
ကျွန်ုပ်သည် software ကိုတိုက်ရိုက်အကောင်အထည်ဖော်နေသောကြောင့်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်း Virtualbox ကို အသုံးပြု၍ virtualization ကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့သည်။
Debian နှင့် Bing Wallpapers များဖြင့် Bing Wallpapers များကိုအလိုအလျောက်ထည့်ပါ
Linux အသုံးပြုသူအများစုနှစ်သက်သောအရာတစ်ခုမှာ၎င်း၏မြင့်မားသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်မှု၊ အရာရာတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်သည်။
KXStudio - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံထုတ်လုပ်သူများအတွက် Distro
Linux လောကတွင်အရသာအမျိုးမျိုးနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အတွက် distros များရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုရှာဖွေရန်အမြဲအဆင်ပြေပါသည်။
.bmp ပုံများကို .jpg သို့ပြောင်းလဲနည်း
ChrisADR ၏ဆောင်းပါးများသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်လက်ခံမှုရှိသည်၊ သို့သော်သူအသုံးပြုခဲ့သောသူ၏ပထမဆုံးဆောင်းပါးများတွင် ...
နေ့ချင်းညချင်းငါစကားပြောဖို့တစ်ခုခုပေးနေတဲ့ OpenSource ERP ODOO ဆိုတာပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချလာတယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်
Linux အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်
ယနေ့ခေတ်တွင် Linux စီမံခန့်ခွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်၎င်းသည် အကယ်၍ ၎င်းသည် ...
Victory Icon Theme - ရိုးရှင်းတဲ့၊
Linux distros များတွင်ပျော်မွေ့နိုင်သော icon packs များအနက် Victory Icon Theme သည်…
console မှ emoji ကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
Emoji ဘာသာစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ များတွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနှစ်မြှုပ်နေသည်။ ထောင်နှင့်ချီသောလျှောက်လွှာများရှိသည်။
FOSS စီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသည်သင့်အားလူသစ်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်သင်ခန်းစာများစွာသင်ယူရန်ခွင့်ပြုသည့်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
တပ်ဆင်ခြင်းတစ်ခုစီနှင့်အတူလေ့ကျင့်ရန်ကျွန်ုပ်သင်ယူခဲ့သော Gentoo installation လုပ်ငန်းစဉ်။ တော်တော်လေးအခြေခံကျပေမယ့်ကမ္ဘာသစ်ကိုတံခါးဖွင့်သင့်တယ်။
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဝယ်ယူရမည်နည်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားပြောပြခဲ့ပြီး၊
Package Management System ဖြစ်သော Portage သည် Gentoo အသုံးပြုသူများကိုပရိုဂရမ်တစ်ခုစီ၏အကောင်းဆုံးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။
သင်အလွန်ခေတ်မီသောကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အချိန်များစွာသိမ်းဆည်းထားသောကွန်ပျူတာတစ်ခုရှိပါကစုစည်းခြင်းသည်သင်၏ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သင့်သည်။ Gentoo Linux ၏ကောင်းကျိုးများ။
ကျွန်ုပ်၏ Gentoo Linux ဇာတ်လမ်း၊ Linux ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသို့သွားသောခရီးနှင့်အခြားအရာများ။
ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသောဘရောင်ဇာများ၏ရှည်လျားသောစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့မှဝက် (ဘ်) ဘရောင်ဇာနှင့်ပူးပေါင်းသည်။
elementary OS တွင် Spice-up ဖြင့်ရိုးရှင်း။ လှပသောတင်ပြချက်များကိုဖန်တီးပါ
Elementary OS သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့အားခွင့်ပြုပေးမည့် Spice-up ဟုခေါ်သောအလွန်ကောင်းသော open source application ရှိသည်။
ရန်သူနယ်မြေအမွေ: Wolfenstein ရန်သူနယ်မြေလိုင်း / ဆာဗာ
ငါတို့အများစုသည်တစ်ချိန်က Wolfenstein: Enemy Territory ဟုလူသိများသောပထမ ဦး ဆုံးလူတစ် ဦး သေနတ်သမားဗီဒီယိုဂိမ်းကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုဘဲကစားခဲ့သည်။
Chromium ဖြင့် Linux တွင် Open English ကိုမည်သို့သုံးရမည်နည်း
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ပါးစပ်အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်စေရန်အတွက် Open English တွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။
Zorin Lite ပတ်ဝန်းကျင်ကို Zorin Os Ultimate ဗားရှင်းတွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
ကျွန်ုပ်သည် Zorin Os Ultimate ကိုလပေါင်းများစွာပျော်ရွှင်စွာအသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့ပြီး (သင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်ကြွေးတင်နေသည်ဟုဝန်ခံပါသည်)
franchise - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော SQL Online Client
AtoMiC Toolkit ဖြင့် HTPC / Home Server အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအလိုအလျောက်ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏တီဗီ / ကွန်ပျူတာများကိုအံ့မခန်းဖွယ်ဖျော်ဖြေရေးစင်တာများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန် HTPC / Home Server အသုံးချပရိုဂရမ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူကြိုက်များသည်။ ဤရွေ့ကား ...
Wifislax64: WiFi ကွန်ယက်များတွင်လုံခြုံမှုအတွက်အကောင်းဆုံးစံနမူနာ
FromLinux စာဖတ်သူများအနေဖြင့် Wifislax64 အကြောင်းနှင့်အခြားသူများသည်ကြားဖူးကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။
မြင်ယောင်ကြည့်ပါ - ခေတ်မီသောမျက်နှာပြင်ပါသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံရိပ်တွန်းစက်
စာဖတ်ခြင်းသည်များများစားစားမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်မာလ်တီမီဒီယာသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုကိုလွှမ်းခြုံသည့်နေရာများတွင် ...
ကျူးကျော်သူများကို kickthemout ဖြင့်မည်သို့သတ်ရမည်နည်း
kickthemout နှင့်အတူကျူးကျော်ရန်အင်တာနက်ဖြတ်တောက်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တွင်ကျူးကျော် ၀ င်ရောက်သူများကိုမည်သို့ပိတ်ဆို့ရမည်၊
League of Legends ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း [Wine + Winetricks + PlayOnLinux]
ကျွန်ုပ်သည်အသည်းအသန် Legends of Legends (LOL) ကစားသမားဖြစ်ပြီးလက်ရှိလက်တင်အမေရိကမြောက်ပိုင်း (LAN) ဆာဗာတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ကစားသည်။
@podcastlinux နှင့် @CompilanPodcast ကဲ့သို့သောလူများကိုကျွန်ုပ် စ၍ မကြားရမီ podcasts များကိုအလွန်နှစ်သက်ကြောင်းဝန်ခံရမည်။
Python ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးအများစုသည်၎င်းကိုသင်ယူရန်အလွယ်ကူဆုံးပရိုဂရမ်းမင်းဘာသာစကားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆကြသော်လည်း ...
အကယ်၍ အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လောကတွင်တစ်ခုခုကျန်ခဲ့မယ်ဆိုရင် multimedia ကစားသမားများဖြစ်လျှင်၊
Tusk - Evernote အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ Desktop App တစ်ခု
Evernote သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုစုစည်းခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏အစွမ်းထက်သောသိုလှောင်မှုနှင့်ခွဲခြားနိုင်စွမ်း ...
Pick ဖြင့် console မှသင်၏စကားဝှက်များကိုစီမံပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုသည့် application အမြောက်အများရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအများစုသည်ဤနေရာတွင် ...
Recultis - သင်ဂိမ်းကစားနည်းများကို Linux တွင်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်
ဖန်တီးထားသည့်ပလက်ဖောင်းများနှင့်ကိရိယာများကြောင့် Linux ပေါ်တွင်ကစားရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။
Xiphos ဖြင့် Linux ၌သမ္မာကျမ်းစာလေ့လာပါ
Apart GTK နှင့် disk အခန်းကန့်များမည်သို့ပုံတူကူးယူနည်း
လွန်ခဲ့သောအချိန်က Clonezilla နှင့်အတူ "restore point" တစ်ခုဖန်တီးနည်းအတွက်သင်ခန်းစာကိုဤ blog တွင် ...
Webminal - အခမဲ့ online linux terminal
Linux သုံးစွဲသူအများစုသည် linux terminal နှင့်ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် ...
LibrePCB အခမဲ့ PCB ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲ
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလကကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ပြောဆိုခဲ့သည့်အကောင်းဆုံး PCB ဒီဇိုင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေသည်။
Haguichi - Linux ရှိ Hamachi အတွက်ဂရပ်ဖစ်မျက်နှာပြင်။
ကစားသမားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် virtual private networks များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သော Hamachi ဟုခေါ်သော tool ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလသည်စပိန်စကားပြော GNU / Linux operating system ကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းသောပွဲတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေသည်။
သင်၏ Linux ကျွမ်းကျင်မှုကိုယုံကြည်ပါ၊
Debian မွေးဖွားပြီး ၂၄ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်
ယနေ့တွင် Unix-based operating system ၏အံ့မခန်းဖွယ်မွေးဖွားမှု ၂၄ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့သည် ...
သင်၏ဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်းများ၏လုံခြုံရေးကို Spaghetti ဖြင့်စစ်ဆေးပါ
ထောင်နှင့်ချီသောဝက်ဘ် application များကိုနေ့စဉ်တီထွင်သည်။ အများစုသည်အခြေခံလုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ၎င်းကိုဆန်းစစ်ရန် ...
/ usr / bin / env အမှားကိုပြင်နည်း - "node" - ဖိုင် (သို့) လမ်းညွှန်မရှိဘူး
Debian, Ubuntu နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ nodejs ကိုအသုံးပွုသညျ့အပလီကေးရှင်းတစျခုကိုအသုံးပွုရနျလြှငျ၊
Gtop: terminal အတွက် system control panel အသစ်တစ်ခု
ConvertAll: Linux အတွက်အပြည့်စုံဆုံးယူနစ် converter
ကျူစက္ကူ - လုံခြုံစိတ်ချရသောမှတ်စုမန်နေဂျာဖြစ်သည်
Linux ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းသည်အတော်လေးကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှနောက်ခံပုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
Zathura - Linux အတွက်စာကြည့်တိုက်သစ်ကြည့်သူ
သင်၌အမျိုးမျိုးသောဖိုင်များဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဖိုင်များကိုကြည့်ရှုရန် application များစွာရှိခြင်းကြောင့်ငြီးငွေ့သလား။
Caprine - Linux အတွက်လှပသော Facebook Messenger သုံးစွဲသူ
Helio Workstation: Linux အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အသုံးဝင်သောတေးဂီတအဆက်မပြတ်
ဂီတဖန်တီးသူများသည် Helio Workstation တွင် Linux အတွက်အလွန်ကောင်းသောဂီတအစီအစဉ်ကိုရရှိလိမ့်မည်။
terminal မှ YouTube ဗွီဒီယိုများကိုဖွင့ ်၍ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်ုပ်တို့သည် YouTube ဘလော့ဂ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည့်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများတွင်ဤနေရာတွင်ပြောခဲ့သည်။
terminal မှ Reddit သွားလာနည်း
ကျွန်ုပ်သည် Reddit ၏အသည်းအသန်အသုံးပြုသူ ဖြစ်၍ အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသည်းအသန်ခေါင်းစဉ်များအကြောင်းကိုအသိပေးနိုင်သည့်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
Ramme - Linux အတွက်အဆင့်မြင့်သော Instagram client
လူမှုကွန်ယက်များသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးယနေ့ခေတ်တွင်အကျော်ကြားဆုံးတစ်ခုမှာ Instagram ဖြစ်သည်။
Musikcube - Terminal အခြေပြုဂီတဖွင့်စက်
OpenSUSE Leap 42.3 သည် SUSE Linux Enterprise 12 SP3 ပေါ်တွင်အခြေခံသည်
OpenSUSE သတင်းလွှာကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ OpenSUSE Leap 42.3 သည်ယခုအခါ download လုပ်၍ ရပြီဖြစ်သည်၊
WordPress နှင့်အားကစားရုံအသင်း ၀ င်မှုကိုမည်သို့စီမံရမည်
လွန်ခဲ့သောရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူတစ် ဦး သည်အားကစားအသင်း ၀ င်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဆော့ဖ်ဝဲအချို့အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းခဲ့သည်။
မင်္ဂလာပါအသိုင်းအဝိုင်း၊ ကျွန်ုပ်၏မျှဝေထားသောဖိုင်တွဲဆာဗာများထဲမှတစ်ခုကိုပြတင်းပေါက်များ၌ပြုပြင်နေစဉ် ...
အသစ်ပြန်လည် Curlew နှင့်အတူမာလ်တီမီဒီယာကိုပြောင်းလဲနည်း
မာလ်တီမီဒီယာကိုပြောင်းလဲရန်ရိုးရာကိရိယာတစ်ခုမှာ Curlew ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသစ်စက်စက်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားပြီး၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအသိုင်းအဝိုင်းများကြောင့် ...
Wine ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အရေးကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုများကိုကြေငြာသည့်အစဉ်အလာအရကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည် ...
ရရှိနိုင် Wireshark 2.4.0
ကော်ပိုရိတ်ကွန်ရက်များဖြတ်သန်းသောလမ်းကြောင်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Wireshark ကိရိယာကိုအစဉ်မပြတ်အသုံးပြုသည်၊ ထို့ကြောင့်အရေးကြီးသည်မှာ ...
OpenEmr - ဒီဂျစ်တယ်ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းကိရိယာတစ်ခု
လွန်ခဲ့သောအချိန်က GNU / HEALTH အကြောင်းလူတိုင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သောကျန်းမာရေးစနစ်နှင့်ထိုအချိန်က…
Orion: Twitch.tv ကိုကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံး linux client
ဗွီဒီယို streaming သည်လက်ရှိလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မိသည်။
Parlatype: သင်စတူဒီယိုကိုစာသားပြောင်းရန်ကူညီမည့်ကစားသမားတစ် ဦး
ဆက်သွယ်မှု 2.0 သည်ဤမျိုးဆက်၏အခြေခံလက်နက်ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ပေါ်ထွက်လာသောကိရိယာများစွာရှိသည်။
Iris - GO ဘာသာစကားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးရန်အမြန်ဆုံး Web Framework
မကြာသေးမီရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၌ GO Language သုံး၍ တီထွင်ထားသော application အမြောက်အများပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။
Tauon ဂီတသေတ္တာ - မင်းကြိုးစားရမယ့် Arch Linux အတွက်ဂီတဖွင့်စက်
ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးစွဲသူများအားသူတို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးနေ့စဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသောကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်စမ်းသပ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့သူ ...
Linux Lite 3.4: ပေါ့ပါးပြီးခေတ်မီသော Ubuntu အခြေခံ
ဒီနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်ကတော့ငါဟာ Lite လို့ခေါ်တဲ့ Linux Lite လို့ခေါ်တဲ့ distro တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်အချိန်တော်တော်များများကုန်လွန်ခဲ့ပြီးပါပြီ။
FreeMind - သင်၏ Samba ဖိုင်ဆာဗာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခု
ဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Samba အကြောင်းအကြိမ်များစွာပြောဆိုခဲ့ပြီး FICO မှမျှဝေထားသော Samba နှင့် ပတ်သက်၍ နိဒါန်းကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။
Hanami - Ruby အတွက်ခေတ်မီသော web framework တစ်ခုဖြစ်သည်
ဝဘ်ပရိုဂရမ်းမင်းတွင်ကျွမ်းကျင်သောကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်း Luis Figueroa ကကျွန်ုပ်တို့သည်ခေတ်မီအောင်ကြိုးစားရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
Lantern ကို အသုံးပြု၍ ပိတ်ဆို့ထားသောမည်သည့် website ကိုမဆို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်
WildBeast - Discord အတွက်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ် Bot
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များက၊ အထူးသဖြင့်အစားထိုးနိုင်သည့်ကစားသမားများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောစူပါအစွမ်းထက်သော VoIP application တစ်ခုဖြစ်သော Linux တွင်မည်သို့ Discord တပ်ဆင်ရမည်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ပဉ္စမ - Opera ကိုအခြေခံပြီးပေါ့ပါးမြန်သော browser
ကျွန်ုပ်တို့သည်စမ်းသပ်ပြီးသော web browser များ၏ရှည်လျားသောစာရင်းထဲသို့ပဉ္စမထပ်ထည့်သည်၊ ယခုတစ်ကြိမ်မှာ ...
Dragonfire: Ubuntu အတွက် virtual assistant
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များစွာရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုအတုဉာဏ်ဖြင့်ဖွင့ ်၍ ကိရိယာများကိုစတင်ရယူရမည်။
ငါတို့အများစုသည်ကျော်ကြားသော Flappy Bird ဂိမ်းသို့မဟုတ် clone တစ်ခုမှကစားရန်နာရီပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့် Linux ကိုနှစ်သက်သူများဖြစ်သော်လည်းအသုံးပြုသူများစွာကိုငြင်းဆို။ မရပါ။
Bitcoin နှင့် cryptocurrencies များစွာတို့၏စျေးနှုန်းမတန်တဆမြင့်တက်မှုနှင့်အတူ, တစ် ဦး ထက်ပိုသောဤလက်ခံစတင်ခဲ့သည် ...
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏လက်ရှိအခြေအနေသည်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမှလျှို့ဝှက်မထားနိုင်ပါ။
သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသုံးပြုရန်အကြံဥာဏ်များဆောင်းပါးတွင်၊ ဆော့ဖ်ဝဲကကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာအကြောင်းမှတ်ချက်ပေးသည်။
ပျား ၃၀ - ကုန်သည်များလိုအပ်သည့်အင်္ဂါရပ်များကိုရည်ရွယ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့် PrestaShop ၏လမ်းဆုံလမ်းခွ
Denemo - အစပြုသူများနှင့်ပညာရှင်များအတွက်ရမှတ်တည်းဖြတ်သူ
လွန်ခဲ့သောတစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်တို့သည် TurnKey Linux blog တွင်ဤသို့ပြောခဲ့သည် - နည်းပညာပလက်ဖောင်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ခွင့်ပြုသည့် virtual device library ...
Mato - Linux အတွက်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းအိုင်ကွန်အထုပ်
Automotive Grade Linux ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Linux သည်လမ်းပေါ်တွင်ရောက်နေပြီ
Linux သည်ဘီးများတပ်ဆင်ထားပြီးအလွန်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုနိုင်ပြီးယခုမှယခု linux kernel ပေါ်လာလိမ့်မည်။
Lutris 0.4.10: ဤအရေးကြီးသောပွင့်လင်းသောဂိမ်းပလက်ဖောင်းကိုအသစ်ပြန်လုပ်သည်
လအနည်းငယ်အကြာ Lutris ၏ဗားရှင်း 0.4 ကိုဖြန့်ချိလိုက်သည်။
Keyboard Shortcut နဲ့ Notifications ကိုအသုံးပြုပြီးစာသားတွေကို Linux မှာဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမလဲ
ကျွန်ုပ်သည် Linux ပေါ်ရှိဂူဂဲလ်ခရုမ်းဘာသာပြန်မှုနှင့်အတူကြာမြင့်စွာကတည်းကပြproblemsနာများရှိခဲ့သော်လည်းအချို့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့်တိုးတက်အောင်စီမံနိုင်ခဲ့သည်။
Linux ရှိ .VOB ဖိုင်မှအသံထုတ်ယူနည်း
ကျွန်ုပ် .VOB ဖိုင်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အားပို့ပေးခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုမှအသံကိုထုတ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ အမှန်တရားမှာ ...
Monitorix - ပေါ့ပါးသည့်စနစ်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာ
Markdown အတွက်ရိုးရှင်း။ လက်တွေ့ကျသောအယ်ဒီတာ
အယ်ဒီတာတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ Markdown အတွက်တည်းဖြတ်သူ Mango အကြောင်းပြောကြမယ် ...
လူမှုကွန်ယက်များမှဖက်ရှင်များသည် GIFs များကိုကာတွန်းကားခြင်း၊ သန်းနှင့်ချီ။ အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များရှိခြင်း၊ အချို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခြင်းနှင့် ...
Linux Deepin 15.4 ကိုစမ်းသပ်ခြင်း၏ရလဒ်သည်ကျေနပ်လောက်ဖွယ်ကောင်းသောအမြင်အာရုံအသွင်အပြင်ရှိသော distro တစ်ခုထက်ပိုသည်။
ဖိုင်များအား Linux ၌ခွဲခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းသည်ဖိုင်များကိုဖိုင်များစွာအဖြစ်ခွဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုပေးသောမျှတသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာကိုစမ်းသပ်ပြီး၊ များစွာသော package များကိုတပ်ဆင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ distros များကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊
ပတ်ပတ်လည်မှာဖြစ်ပျက်နေသောနောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်ရန်သို့မဟုတ် ၀ မ်းမြောက်ဖို့အချိန်ရှိမရှိကျွန်ုပ်မသိပါ။
Mastodon အသုံးပြုသူများသိသင့်သောလှည့်ကွက်များ၊ ကိရိယာများနှင့်သိကောင်းစရာများ
ding နှင့်အတူ console ကနေအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲနည်း
ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကိုမှန်ကန်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်အားလျှို့ဝှက်ချက်များအသုံးပြုခြင်းသည်လျှို့ဝှက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဆက်သွယ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးအတွက်စစ်ပွဲ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ခန့်တွင်စစ်ပွဲကိုစတင်ခဲ့သည်။
CodeCombat နှင့်ကစားစဉ် Python တွင်ပရိုဂရမ်လေ့လာခြင်းကိုလေ့လာပါ
Python သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အသုံးအပြုဆုံးနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော programming language တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏အဓိကအားသာချက်မှာ ...
Buku: terminal မှအဆင့်မြင့် bookmark မန်နေဂျာ
Thunderbird ၏ပုံပန်းသဏ္inာန်အားနည်းချက်များ၊ မည်သည့်ဒီဇိုင်းမျှမရှိသေးသောမည်သူ့ကိုမျှလျှို့ဝှက်မည်မဟုတ်ပါ။
စာတိုက် - လူတိုင်းကြိုးစားသင့်သော Sendgrid အခြားနည်းလမ်း
ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်ဆာဗာများ အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအသုံးပြုရန်ပိုမိုများပြားလာသည်။
သင်၏ terminal မှ CMus ဖြင့်သီချင်းနားထောင်ပါ
CMus သည် Unix စနစ်များအတွက်ရနိုင်သော Terminal အခြေပြု open-source ဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ Ogg အပါအ ၀ င်အသံအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲများကို chmod-jou ဖြင့်မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်နည်း
Sincelinux ဘလော့၏ရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ ခင်ဗျားကဲ့သို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမျှော်လင့်ပါတယ်။
Tomb Raider OpenTomb ကိုကျေးဇူးတင်ပါ
Tomb Raider ရုပ်ရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပျော်ခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့ရုပ်ပြတွေကိုဖတ်ဖူးတယ်။
ဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုစောင့်ကြည့်။ ထပ်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာဖြစ်သော Conky အကြောင်းထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခဲ့သည်။
ဖိုင်များနှင့်လမ်းညွှန်များကို Linux ရှိတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်း rsync နှင့်လွယ်ကူပါသည်။
CentOS 7- SMB ကွန်ယက်များတွင် Squid + PAM စစ်ဆေးခြင်း
စီးရီး၏အထွေထွေညွှန်းကိန်း - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်းစာရေးသူ - Federico Antonio Valdes Toujaguefedericotoujague@gmail.comhttps: //blog.desdelinux.net/author/fico မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများနှင့်…
ကျွန်ုပ်တို့သည် habiteca ကိုတီထွင်စဉ်ကမတူကွဲပြားသောအချိန်တွင်ကုဒ်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ချက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
ကိရိယာများ၊ algorithms များနှင့်များပြားလှသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲလာသည်။
PAM Authentication - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးကွန်ရက်များ
စီးရီး၏အထွေထွေညွှန်းကိန်း - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်းမင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ။ ဤဆောင်းပါးဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရည်ရွယ်ပါသည် ...
Python3ကို Linux ထဲမှာ Python2နဲ့ဘယ်လိုအစားထိုးမလဲ
၎င်းသည်သင် Python တွင်တည်ဆောက်ထားသော application ပေါ် မူတည်၍ သင်အလုပ်လုပ်သော Python3စကားပြန်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မည် ...
Robotopia ဖြင့် virtual robot များကိုပရိုဂရမ်ရေးရန်ကလေးများကိုသင်ပေးပါ
ဒီနေ့ခေတ်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘာသာစကားများ၊ သင်္ချာနည်းများနှင့်အပြုအမူများကိုသင်ယူသည့်နည်းတူ၊ ကုဒ်ကိုသင်ယူသင့်သည်။ The …
အနီရောင်နှင့် Unity 8 မှ Ubuntu ကိုမဖြုန်းတီးနိုင်ပါ။
Mark Shuttleworth ၏ကြေငြာချက်အရယနေ့တွင်၎င်းသည်စွန့်ခွာမှုအကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသောကြောင့်ယနေ့တွင်အတော်လေးပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။
Opus အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှအရာအားလုံး - ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဗဟုသုတအသစ်တစ်ခု။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကရိုက်ထည့်ပါ
Google Earth Enterprise source code ကို Github တွင်ရနိုင်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Google Earth Enterprise source code ကိုမနေ့ကကတည်းကကြေငြာခဲ့သည်။
LastPass လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသောလုံခြုံရေးအားနည်းချက်ကိုလေ့လာပြီးနောက် ...
Centent7တွင် Magento ကိုအလိုအလျောက်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း
Pong-command ဖြင့် Ping Pong ကိုကစားပါ
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆဲလ်ဖုန်းများမှသို့မဟုတ် Ping Pong ကစားခြင်းကိုနာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်စစ်မှန်သောဂိမ်းများတွင်ကစားခဲ့ကြသည်။
Selene Media Encoder - Linux အတွက်ရိုးရိုး Audio Video Converter
Linux မှအကောင်းဆုံးဘလော့အဖြစ် Open Awards 2017 ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည်
DesdeLinux ကိုအကောင်းဆုံးဘလော့အတွက် ၂၀၁၇ ပွင့်လင်းဆုပေးပွဲတွင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခံရသည့်အတွက် ...
အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏စာရင်းကိုင် - စီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ကိရိယာတစ်ခုရွေးချယ်ပုံ
ဘဏ္daysာရေးနှင့်ပြည်သူ့အကြွေး ၀ န်ဆောင်မှုသည်မကြာသေးမီရက်များအတွင်းကစာရင်းအင်းစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်မည့်ယန္တရားများနှင့်ကိရိယာများကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Netflix သည်ယခုအခါ Linux အတွက် Firefox ကိုထောက်ပံ့သည်
Firefox နှင့် Netflix အသုံးပြုသူများစွာ၏စောင့်ဆိုင်းမှုသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော streaming platform အဆုံးသတ်သွားသည်။
puddletag: Linux အတွက်အသံကောင်းတဲ့အယ်ဒီတာကောင်းတစ်ခု
Flattiance: Ubuntu Ambiance ဆောင်ပုဒ်ကိုအခြေခံသည့် Semi Flat theme
Visual Studio Code ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
.Net တွင်တိုးတက်ရန်အကောင်းဆုံးတည်းဖြတ်သူများထဲမှတစ်ခုမှာ Visual Studio Code ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားနည်းပညာများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သော ...
Crypto-jou ကို အသုံးပြု၍ gpg စကားဝှက်ဖြင့်ဖိုင်စာဝှက်စနစ်ကိုမည်သို့စီမံခန့်ခွဲရမည်နည်း
DesdeLinux ဘလော့မှရဲဘော်ရဲဘက်များ၊ ခင်ဗျားလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပြီးမင်းရဲ့အလုပ်မှာအောင်မြင်မှုရစေဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
Giswater - ရေကြီးမှုရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချပေးတဲ့ software
ရေကြီးခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူ ဦး ရေအများဆုံးထိခိုက်သည့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိပီရူး ...
Linux သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ distro ၏ပုံပန်းသဏ္ဌာန်ကိုဆက်လက်တိုးတက်စေရန် cursor အသစ်တစ်ခုရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် console ကိုမကြာခဏသုံးသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် command များကိုအလွတ်ကျက်။ မရဟုဝန်ခံသော်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တွင်ရှိသည့် "cheat sheet" ကိုအသုံးပြုသည်။
၀ င်းဒိုးမှ Linux သို့ကူးပြောင်းသောသုံးစွဲသူအများစုသည်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောအခမဲ့ရုံးအစီအစဉ်များကိုအသုံးပြုရန်အသုံးမပြုထား ...
ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း - SME ကွန်ယက်များ
မင်္ဂလာပါ။ စီးရီး၏အထွေထွေအညွှန်းကိန်း - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်းကျွန်ုပ်တို့မကြေငြာသေးပါ။
[ထင်မြင်ချက်] အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြဝန်ဆောင်မှုများ - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးကွန်ယက်များ
မင်္ဂလာပါ။ စီးရီး၏အထွေထွေအညွှန်းကိန်း - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်းအများစု ...
Plasma5ကိုနှစ်သက်သောအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ထပ်ဆောင်းအသစ်များကိုလက်ခံရန်ငြီးငွေ့ပါသည်။
VMware သည် Linux Foundation သို့ Gold အသင်းဝင်သည်
VMware သည် Linux Foundation အဖြစ် Gold အသင်းအနေဖြင့်ပါ ၀ င်ကြောင်းကြေငြာသည်။
Ombi: Plex အသုံးပြုသူများနှင့်သူတို့၏တောင်းဆိုမှုများကိုစီမံရန်စနစ်
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Plex ၏အံ့ဖွယ်ရာများကိုနှစ်သက်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးမာလ်တီမီဒီယာသိုလှောင်ထားသောဆာဗာတစ်ခုကိုတည်ဆောက်သည်။
အသစ်သော LeoCAD ဖြင့် LEGO ကဲ့သို့သောအဆောက်အ ဦး များကိုဖန်တီးပါ
ကွန်ပြူတာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်း (CAD) သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲလောကတွင်အားကောင်းလာပြီးနောက်ကွယ်မှ ...
... ကျူးကျော်ရန်တာဝန်ရှိသော bot များနှင့်စစ်တိုက်ခြင်း
Plasma5သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ကျဆင်းသွားပြီး၎င်းသည်သုံးစွဲသူများသည်ပုံမှန်အားဖြင့် Linux Mint ၏တည်ငြိမ်သော desktop environment ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်သည်ဟုဆိုသည်။
Uber CLI နှင့်အတူ console မှ Uber
Uber ပီရူးကိုရောက်ရှိကတည်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာခဲ့ပေမယ့်ဒီပလက်ဖောင်းအခြားသူတွေအတွက်ခရီးရှည်လျားသော ...
AceStream ကို Linux မှာဘယ်လိုသွင်းရမယ်၊
AceStream ကို Linux တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်၊ distros အားလုံး (Ubuntu 14.04 နှင့် 16.04, Arch Linux, Debian, Fedora, OpenSuse နှင့်အခြားအရာများ) ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကရိုက်ထည့်ပါ
Lila HD ကိုရိုးရှင်းသောအိုင်ကွန်ဆောင်ပုဒ်နှင့်တွေ့ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Linux ဖြန့်ချိမှုများ၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်စေရန်ပံ့ပိုးမှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားအတော်အတန် icon အသစ်တစ်ခုဆောင်ယူလာပါမည်။
Signal သည်သင်ထင်သည်အတိုင်း Google ပေါ်တွင်မူတည်သည့် Firebase Cloud Messaging (ယခင် Google Cloud Message သို့မဟုတ် GCM) ကိုအသုံးပြုသည်။ Google ကထင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံး Linux distro အတွက်မျက်နှာအသစ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည့် application များ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါသည်။
CentOS 7.3 အပေါ် Dnsmasq - အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများကွန်ယက်များ
စီးရီး၏အထွေထွေညွှန်းကိန်း - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်းမင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဆောင်းပါးအား Dnsmasq သို့အထူးရည်ညွှန်းသည်။
Gmail ကို Gnome desktop နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းစပ်မလဲ
ဂျီမေးလ်သည်ယနေ့လူသုံးအများဆုံးအီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အမြဲတမ်းမွမ်းမံမှုများ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည် ...
Linux ပေါ်ရှိ Web Design နှင့် UX အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာသစ်များ
ယခုအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည် web / UX ဒီဇိုင်းကိုအဓိကထားပြီးအမှန်တရားမှာအမြဲတည်ရှိသည်။
ScudCloud - Linux အတွက်အကောင်းဆုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့သုံးစွဲသူ
လအနည်းငယ်အကြာ Slack-Gitsin နှင့်ဒီပလက်ဖောင်း၏အံ့ဖွယ်ရာများနှင့်အတူ console မှ Slack ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာပြောပြခဲ့သည်။
Shadow သည် Gnome အတွက်တောက်ပ။ သန့်ရှင်းသော icon ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်
Gnome သည်လူအများစုအတွက်အလှပဆုံးနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော desktop ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာတစ်လုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည်။
Poseidon - မြန်ဆန်ပြီးရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီးပေါ့ပါးတဲ့ browser တစ်ခု
Meet Poseidon - မြန်ဆန်မှု၊ အနိမ့်ဆုံးနှင့်ပေါ့ပါးသည့်ဘရောက်ဇာသည်လုံခြုံရေး၊ terminal၊ ဒေါင်းလုပ်မန်နေဂျာနှင့်အခြားသူများပါ ၀ င်သည်
La Capitaine - macOS နှင့် Google Material Design တို့မှုတ်သွင်းထားတဲ့ icon pack တစ်ခု
အခြား operating system များမှသုံးစွဲသူများပြောသောလိမ်လည်မှုမှာ "Linux သည် Ugly" ဖြစ်သည်။
BIND နှင့် Active Directory® - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးကွန်ယက်များ
စီးရီး၏အထွေထွေညွှန်းကိန်း - အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကွန်ယက်များ - နိဒါန်းမင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းများ။ ဤဆောင်းပါး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် ...
Green Recorder - Linux အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် Desktop Recorder
ကျွန်ုပ်တို့၏ Desktop ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာအရေအတွက်များပြားလာသည်၊
လွန်ခဲ့သောရက်များကပင်လူအများတို့သည်ကျော်ကြားသော်ငြားအန္တရာယ်ရှိသော rm command ကိုအသုံးပြုသောအခါပြသနာများရှိခဲ့သည် ...
သဟဇာတ: ကြမ်းတမ်းသောကစားသမားနှင့် cloud applications များနှင့်သဟဇာတ
Alduin: ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော RSS နှင့် Atom feed aggregator
RSS aggregators သိသိသာသာပြောင်းလဲလာကြပါပြီ, ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများနှင့်အရသာအားလုံးအတွက်, ဤအချိန်သူတို့ ...
ငါ desktop ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောဓာတ်ပုံနှင့်ဓာတ်ပုံစီစဉ်သူကိုရှာဖွေနေသည်။ Phototonic ကိုငါရှာခဲ့သည်။ အဖြစ် ...
QtCAM - QT တွင်ပြုလုပ်ထားသော WebCam အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာ
Linux ဖြန့်ဝေမှုအများစုသည်ပုံမှန်အားဖြင့် WebCam အတွက် application တစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြန့်ဖြူးခြင်းများစွာဖြစ်နိုင်သည်။
DOS ပရိုဂရမ်များကို Linux တွင်မည်သို့သုံးရမည်နည်း
တခါတရံကျွန်ုပ်တို့သည် DOS ပရိုဂရမ်များကို Linux တွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သဘာဝအရမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
MultiBootUSB ဖြင့် multiboot Pendrive တစ်ခုဖန်တီးနည်း
Multipoot လုပ်ရန်အတွက် Pendrive သည် DesdeLinux တွင်အများဆုံးဖြေကြားခဲ့သည့်မေးခွန်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
LibreTaxi: Telegram ကို အခြေခံ၍ Uber ကိုအစားထိုးခြင်း
Libretaxi: Telegram ကို အခြေခံ၍ Uber ကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ LibreTaxi တွင်လူတိုင်းအနိုင်ရသည်။ ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည်များသည်ကြားခံမပါဘဲညှိနှိုင်းနိုင်သည်